အမြန်လမ်းတွင် Expressကား (၅)စီး ဆင့်တိုက်မှု ဖြစ်ပွား. . . - Myanmar People Alliance
အမြန်လမ်းတွင် Expressကား (၅)စီး ဆင့်တိုက်မှု ဖြစ်ပွား. . .
နေပြည်တော်- ရန်ကုန် အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်-၂၄/၁ – ၂၄/၂ ကြားတွင် ကား(၅)စီး ဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပွား
အောက်တိုဘာလ(၁၆)ရက်နေ့နံနက် (၀၆၃၀ ) အချိန်နေပြည်တော်- ရန်ကုန် လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ်-၂၄/၁ – ၂၄/၂ ကြားတွင် ယာဉ်မောင်းကိုထိန်လင်းဇော် ထောက်ကြန့်မြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသည့်…
ယာဉ်အမှတ်YGN 1M/—–Scania အမျိုးအစားဖြူ/ပြာကြားရောင် မန္တလေး-ရန်ကုန်Famous လိုင်းခရီးသည်တင် Express ယာဉ်သည် အရှိန်လွန်ကာ လမ်းလယ်ကျွန်းပေါ်တက်သွားသဖြင့်. .
နောက်မှရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်လိုက်ပါလာသော ယာဉ်အမှတ် YGN2G/—-Scania အမျိုးအစား မုံရွာ-ရန်ကုန် Elite ခရီးသည်တင် Express. . .၊ယာဉ်အမှတ် YGN 3K/—-Yutong အမျိုးအစား ရွှေသလ္လာလိုင်း မုံရွာ-ရန်ကုန် ခရီးသည်တင် express ယာဉ်နှင့်
ယာဉ်အမှတ်- YGN 9J/—Yutong အမျိုးအစားမန်းသစ္စာလိုင်း ချောက်- ရန်ကုန် ခရီးသည်တင် express ယာဉ် (၃) စီးမှ ဘရိတ်အုပ်အရှိန်လျော့လိုက်စဉ်..
လားရာတူနောက်မှ ယာဉ်မောင်းဦးစောဘလက်ဇက် မှော်ဘီမြို့နေသူမောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်အမှတ်-YGN2G/—Scania အမျိုးအစား Elite ယာဉ်လိုင်း မုံရွာ-ရန်ကုန် ခရီးသည်တင် Express ယာဉ်မှ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲနောက်မှ ဝင်တိုက်လိုက်သောကြောင့်…ရှေ့မှ Express ယာဉ်(၃) စီးတို့အား ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် တိုက်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
သို့သော် ယာဉ်(၅)စီးပေါ်တွင် လိုက်ပါလာခဲ့ကြသော ယာဉ်မောင်း/ယာဉ်နောက်လိုက်များ အပါအဝင် ခရီးသည်ကျား(၈၀) ဦး မ(၁၂၈) ဦးပေါင်း(၂၀၈) ဦးတို့တွင် ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
နပွေညျတျော- ရနျကုနျ အမွနျလမျး မိုငျတိုငျအမှတျ-၂၄/၁ – ၂၄/၂ ကွားတှငျ ကား(၅)စီး ဆငျ့တိုကျမှုဖွဈပှား
အောကျတိုဘာလ(၁၆)ရကျနနေံ့နကျ (၀၆၃၀ ) အခြိနျနပွေညျတျော- ရနျကုနျ လမျးမကွီး မိုငျတိုငျအမှတျ-၂၄/၁ – ၂၄/၂ ကွားတှငျ ယာဉျမောငျးကိုထိနျလငျးဇျော ထောကျကွနျ့မွို့နသေူ မောငျးနှငျလာသညျ့…
ယာဉျအမှတျYGN 1M/—–Scania အမြိုးအစားဖွူ/ပွာကွားရောငျ မန်တလေး-ရနျကုနျFamous လိုငျးခရီးသညျတငျ Express ယာဉျသညျ အရှိနျလှနျကာ လမျးလယျကြှနျးပျေါတကျသှားသဖွငျ့. .
နောကျမှရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့လိုကျပါလာသော ယာဉျအမှတျ YGN2G/—-Scania အမြိုးအစား မုံရှာ-ရနျကုနျ Elite ခရီးသညျတငျ Express. . .၊ယာဉျအမှတျ YGN 3K/—-Yutong အမြိုးအစား ရှသေလ်လာလိုငျး မုံရှာ-ရနျကုနျ ခရီးသညျတငျ express ယာဉျနှငျ့
ယာဉျအမှတျ- YGN 9J/—Yutong အမြိုးအစားမနျးသစ်စာလိုငျး ခြောကျ- ရနျကုနျ ခရီးသညျတငျ express ယာဉျ (၃) စီးမှ ဘရိတျအုပျအရှိနျလြော့လိုကျစဉျ..
လားရာတူနောကျမှ ယာဉျမောငျးဦးစောဘလကျဇကျ မှျောဘီမွို့နသေူမောငျးနှငျလာသညျ့ ယာဉျအမှတျ-YGN2G/—Scania အမြိုးအစား Elite ယာဉျလိုငျး မုံရှာ-ရနျကုနျ ခရီးသညျတငျ Express ယာဉျမှ အရှိနျမထိနျးနိုငျပဲနောကျမှ ဝငျတိုကျလိုကျသောကွောငျ့…ရှမှေ့ Express ယာဉျ(၃) စီးတို့အား ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ တိုကျမိမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးသိရှိရပါသညျ။
သို့သျော ယာဉျ(၅)စီးပျေါတှငျ လိုကျပါလာခဲ့ကွသော ယာဉျမောငျး/ယာဉျနောကျလိုကျမြား အပါအဝငျ ခရီးသညျကြား(၈၀) ဦး မ(၁၂၈) ဦးပေါငျး(၂၀၈) ဦးတို့တှငျ ကံကောငျးထောကျမစှာဖွငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာဖွဈမှု မရှိခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါသညျ။